Shiinaha loo yaqaan 'acrylic plexiglass saarayaasha iyo alaableyda' Gokai
Acrylic Plexiglass waxaa lagu heli karaa Waraaqaha Gooya-ilaa-Xajmiga ah, Xaashida Buuxda, ama Heerarka Aasaasiga ah ee Heerka ah. Xaashida 'Plexiglass sheet' waa muraayad, calaamado, hindhiso waardiye, daaqad ama waxyaabo soo bandhiga oo xoog leh, qoyaan u adkaysta & kana cad cad dhalada. Plexiglass sidoo kale waa la sameyn karaa kuleylka iyada oo aan lumin caddaynta indhaha. Go'aannada looxa ee loo yaqaan 'acrylic sheets' waa kuwo dhaqaale ahaan, saameyn u adkaysta waxayna noqon karaan kuwo sax ah oo loo jarjaro cabir ahaan. Haddii aad u baahan tahay plexiglass, ha booqan Hoyga Keydka ama Lowes, wac "Xirfad". Waxaan si toos ah albaabkaaga u jareyn doonnaa go'yaasha iyo maraakiibta xajmiga leh ee loo yaqaan 'plexiglass'.
Xaashida looxa ee looxa loo yaqaan 'Acrylic Plastic Sheet' waa eray guud oo loo yaqaan 'acrylic' iyo 'methacrylic chemicals'. Oo ay ku jiraan monomers, go'yaal, pellets, resins iyo qalabka isku dhafan, go'yaal acrylic ka samaysan yihiin methyl methacrylate monomer (MMA) polymerized, kuwaas oo polymethyl methacrylate (PMMA) sheet plexiglass, "organic" Glass "waxaa laga soo qaatay magaca ganacsiga" Oroglas "(a nooca PMMA loox), waxaana laga soo qaatay "OrganicGlass" (a plexiglass) Laakiin sanadihii la soo dhaafay, dhammaan balaastigyada hufan sida PS iyo PC waxaa si wada jir ah loogu yeeraa go'yaal plexiglass ah.
Faa'iidada loo yaqaan 'Acrylic Plexiglass'
Marka la barbardhigo muraayadda, Plexiglass wuxuu inta badan bixiyaa hufnaan ballaaran, maadaama muraayadaha ay u badan tahay inuu ka muuqdo iftiinka, abuurista milicsiga iyo dhalaalka. Qalabka kululeeyaha wuxuu bixiyaa jajab-celin weyn, adkeysi iyo ka hortagga nabaad-guurka marka la barbar dhigo muraayadda.
• Hufnaan iyo muuqaal hufan oo wanaagsan
• Aad ugu adkaysata kala duwanaanta heerkulka
• Ilaa 17 jeer saameynta caabbinta muraayada caadiga ah
• Kala badh miisaanka muraayadda oo ku habboon saxitaanka mishiinka
• Aad ugu adkeysata kiimikooyin badan oo kala duwan
• Balaastiigga: Balaastigga sarreeya, ka baaraandegista iyo qaabeynta qaab fudud
Codsiga loo yaqaan 'Acrylic Plexiglass'
Acrylic Plexiglass, Plexi-glass Windows, Plexiglass Sneeze Guards, Gaashaanka, Caqabadaha, Laydhka, Calaamadaha, aquariums-ka, Muujinta Soo Iibsiga, Muuqaalka Sawirada, Dhalashada Wax-u-adkaysiga, dhalaalka dhismaha, muuqaalka tafaariiqda, calaamadaha, nalalka, yareynta buuqa, ilaalada warshadaha. , jadwalka maqaayadaha, iyo dukumiintiyada xafidaada.
Hore: bunning xaashida looxa
Xiga: go'yaal plexiglass
Xaashida looxa loo yaqaan 'Acrylic Plexiglass Sheet'